बिहीबार नेपाली आकाशमा किन यस्तो भयो ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ७ श्रावण २०७२, बिहीबार १६:२४ |
काठमाडौं । बिहीबार मध्यान्ह् नेपाली आकाशमा अनौठो दृश्य देखेर सबैजना अचम्ममा परे । वृत्ताकार नाङ्लो जस्तो कालो घेराले सूर्यलाई घेरेपछि त्यसबारे सबैले आ आफ्नो ढंगले विश्लेषण गरेका छन् ।
कसैले आकाशमा इन्द्र सभा बसेछ भने कसैले सूर्यसभा बसेछ भन्न थाले । केहीले अनिस्टको संकेत मान्दै भूइँचालोसँग जोडेर जनजीवन आतंकित पार्न समेत खोजे ।
खास भएको के हो ? एस्ट्रोमिनकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईका अनुसार,’बायुमण्डलको तापक्रम चिसोबाट तोतोमा परिर्वतन हुँदा यस्तो घटना हुनेगर्छ’, उहाँले यसलाई खगोल विज्ञानमा सन हालो भनिने बताउँनुभयो ।
चन्द्रमालाई पनि कहिले कहीँ यस्तै बृत्ताकार बादलले छोप्ने गरेको बताउँदै उहाँले चन्द्रमालाई छोप्नुलाई भने ’लुनार हालो’ भनिने बताउँनुभयो । ब्रह्माण्डमा भएका अन्य ताराहरुका हकमा पनि यस्तो ’हालो’ देखिने गरेको उहाँले बताउँनुभयो ।
बायुमण्डलमा भएको ग्यास, पानी तापक्रम परिवर्तन हुँदा फेरिने कारणले यस्तो हालो बन्ने गर्दछ । ’इन्द्रसभा, सूर्यसभा भन्दा पनि यसलाई वैज्ञानिक घटनाको रुपमा लिएर मनोरञ्जन गर्नु राम्रो हुन्छ’, भट्टराईले बताउँनुभयो ।
अनिस्ट हुने वा अन्य किसिमका भविष्यवाणीको वैज्ञानिक सत्यता नभएको भट्टराईले बताउँनुभयो । यो नितान्त हाम्रो बायुमण्डलमा भएको तापक्रम परिवर्तनको खेल मात्र भएको बताउँदै उहाँले इन्द्रेणी देखिए जस्तै यो पनि सामान्य घटना मात्र भएको बताउँनुभयो ।
Previousबित्तिय सस्थाहरुको न्यूतनम चुक्ता पुँजीमा बृद्धि
Nextएक महिनाभित्र नेपालमा अनिष्टको संकेत गर्दै गुगल व्वाइ रोए !
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो रद्द गर्ने ऊर्जामन्त्रीको चेतावनी
१९ श्रावण २०७४, बिहीबार ०१:३५
संसद विघटन गर्न लागेको हल्ला निराधार : माओवादी
१८ बैशाख २०७४, सोमबार ०८:५७
अष्ट्रेलियाको नर्थ मेलबर्नस्थित चर्चबाट दुईजना पक्राउ,हाइ अलर्टमा प्रहरी
१४ बैशाख २०७६, शनिबार ०२:१४
असार १४ को निर्वाचन सार्न राजपाको दबाव
२७ जेष्ठ २०७४, शनिबार ०८:२०